Kambani yedu inobata 16th Automechanika Shanghai kuNational Exhibition uye Convention Center (Shanghai) kubva Zvita 02 kusvika 05, 2020
Ndatenda zvikuru nekuramba uchitsigira kambani yedu,
Pane ino chiitiko, Changzhou Deao Vehicle Technology Co, Ltd. inoda kuwedzera kukoka kwedu kwemoyo wese kwauri uye unotarisira kushanya kwako.
Maindasitiri emukati asingakwanise kushanyira nzvimbo iyi nekuda kwekurambidzwa kwekufamba anogona kutora chikamu muchiitiko chepasi rose chemabhizimusi kuburikidza neAMS Live online chikuva, iyo ichave yakavhurwa kubva munaNovember 30 kusvika Zvita 6. Iyo AMS Live chikuva ichapa imwe nzira iri nyore kune vakawanda vateereri vekunze kwenyika vasingakwanise kuenda kunzvimbo.
Yegumi nematanhatu Automechanika Shanghai inotarisirwa kukwezva vangangoita 3,900 varatidziri kubva kune rese mota indasitiri cheni, iine yakazara nzvimbo yekuratidzira ye 280,000 mativi emamita. Chiratidziro ichi chichatarisa zvizere dingindira rekuti "Kuvaka Ramangwana reMotokari Ecosystem", kugadzirisa nekuvandudza zvikamu zvikuru zvinomwe nenzvimbo nhatu dzakakosha, nekusimudzira kubatanidzwa kwe zviwanikwa zvemaindasitiri nekusimudzira kwemuganhu matekinoroji matsva.
Parizvino, Automechanika Shanghai ndiyo hombe uye yakanyanya kuwanda mota aftermarket kuratidzwa pakati peakawanda maAsia emitambo. Icho chiratidziro chakatarisa-tarisa, chinotungamira indasitiri yemotokari kumba nekune dzimwe nyika kuenda kune ramangwana repamusoro-tekinoroji nyowani yekuvandudza tekinoroji. Iyo inovhara akasiyana akasiyana auto mushure mekutengesa masevhisi, uye iine hupfumi hwemusika ruzivo.
Sekuratidzira kwenyika dzese, Automechanika Shanghai inotipa nzira inobatsira zvikuru yekuongorora misika iri kubuda nekumisidzana nepedyo nevatengi.
Ino nguva isu takaunzawo huru yekutengesa chigadzirwa TPE mota matai uye zvimwe auto zvishongedzo, tichitarisira kuwedzera musika wekutengesa, uye panguva imwechete kubata vazhinji vedu vasina kubikwa musika vatengi. Iyi ine yakanaka inotungamira nzvimbo yekambani inotevera kusimudzira, kuti tinzwisise tarisiro yemusika nemikana.
Iye zvino auto musika yakatangisa mukuchinja kamwe-muzana-rezana. Nekutora chikamu muAutomechanika Shanghai, tinogona kusangana zvirinani nematambudziko uye nekunzwisisa ramangwana rekuvandudza musika.